ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 10 John
10:1 "Amen, amen, Ndithi kuwe, lowo na ukungena ngomnyango yangena esibayeni impahla emfutshane, kodwa ekhwela ngenye indlela, yena isela nesihange.
10:3 Kuye mnyango uyamvulela, yaye izimvu balive ilizwi lakhe, kwaye izimvu zakhe uzibiza ngamagama, yaye azikhokelele ngaphandle.
10:4 Akuba Buthume iigusha zakhe, uhamba phambi kwabo, yaye izimvu zimlandele, ngokuba zilazi izwi lakhe.
10:5 Kodwa ngaba ukulandela owasemzini; kunokuba babalekela kuye, kuba azilazi ilizwi labasemzini. "
10:6 UYesu wathetha lo mzekeliso kubo. Kodwa bona babengayiqondi into awayeyithetha kubo.
10:7 ngoko ke, UYesu wathetha kubo: "Amen, amen, Ndithi kuwe, ukuba Ndim isango lezimvu.
10:8 bonke abanye, bonke abo baye kufika, kuba babengamasela nezihange, yaye izimvu akabaphulaphula kubo.
10:9 Ndim isango. Ukuba nabani na wangena ngam, uya kusindiswa. Yena uya kungena ephuma, yaye uya kufumana amadlelo.
10:10 Le Isela alizi, ngaphandle ukuze ndibe nangokubulala nokutshabalalisa. Mna ndizele ukuze babe nobomi, kunye nabo ke ngokugqithiseleyo.
10:11 Ndim umalusi olungileyo. Umalusi olungileyo, ubomi bakhe ubuncamela izimvu zakhe.
10:12 Kodwa isandla baqesha, nalowo akukho umalusi, lowo izimvu Anifanele, ubona ingcuka abasondela, kwaye isuka izimvu abaleke. Ukonakalisa ingcuka uyabachithachitha izimvu.
10:13 Abaleke isandla baqesha, kuba isandla njengomqeshwa kwaye akukho inkxalabo izimvu ngaphakathi kwakhe.
10:14 Ndim umalusi olungileyo, yaye ndiyazazi ezam, siqu zam ziyandazi,
10:15 kanye njengoko uBawo uyazi, nam ndiyamazi uBawo. Kwaye mna ndibuncama ubomi bam ngenxa izimvu zam.
10:16 Ndinazo nezinye izimvu ezingezizo ezobu buhlanti, yaye ndimele ndibakhokele betarhuzisa. Baya kuliva izwi lam, kwaye kuya kubakho ngesango esibayeni mnye, nomalusi abe mnye.
10:17 Ngesi sizathu, uBawo endithanda: ngokuba mna ndibuncama ubomi bam, ukuze ndibuye phezulu ndibuthabathe.
10:18 Akukho namnye ubuhluthayo kum. kunokuba, Ndiyabuncama mna phantsi asiyantliziyo yam. Kwaye kufuneka amandla walala phantsi. Kwaye kufuneka amandla kwakhona ndibuthabathe. Nguwo lo umthetho, ukuba nam ndilifumene kuBawo elo gunya. "
10:19 A ingxwabangxwaba kwakhona kwenzeka phakathi amaYuda ngenxa yala mazwi.
10:20 Ke abaninzi kubo bathi: "Unedemon okanye yena Uyageza. Yini na ukuba nimphulaphule kuyo?"
10:21 Abanye bathi: "Le amazwi umntu oye Unedemon. Ingaba idemon kuba njani nako ukuvula amehlo eemfama?"
10:22 Ke kaloku, kwabakho umthendeleko wokuhlaziywa kwetempile eYerusalem, kwaye kusebusika.
10:23 UYesu wayehamba etempileni, kwi evarandeni kaSolomon.
10:24 Kwaye ngoko ke amaYuda amrhawula kunye wathi kuye: "Kuya elingakanani ubambe imiphefumlo yethu na usiphongomisile? Ukuba unguye uKristu, sixelele ngokuphandle. "
10:25 Waphendula uYesu wathi kubo: "Ndithetha nawe, kwaye musani ukukholwa. Imisebenzi endiyenzayo mna egameni likaBawo, ezi mveliso zibe ubungqina ngam.
10:26 Kodwa musani ukukholwa, kuba aningabo abezimvu zam.
10:27 izimvu ziyaliva ilizwi lam. Kwaye ndiyazi ukuba, kwaye landela me.
10:28 Mna ndizinika ubomi obungunaphakade, kwaye baya kutshabalala, ngokuba ingunaphakade. Kwaye akukho namnye uya wazithimba esandleni sam.
10:29 Yintoni uBawo wanika kum mkhulu kunabo bonke, kwaye kungekho namnye unako ukuba bambambe esandleni kaBawo.
10:30 Mna noBawo sibanye. "
10:31 ngoko ke, amaYuda achola amatye, ukuze amxulube.
10:32 Waphendula uYesu wathi kubo: "Ndiya kukuvisa imisebenzi emininzi emihle ivela kuBawo. Ngenxa yawuphi na umsebenzi nindixuluba?"
10:33 Aphendula ke ngoko amaYuda kuye: "Thina musa Asikuxulu beli msebenzi mhle, sikuxuluba ngokuba unyelisa nangenxa, nangona wena uyindoda, usuke uzenze uThixo. "
10:34 UYesu wamphendula kubo: "Akatsho na kubhaliwe emthethweni wakho, 'Ndithe: ningoothixo?'
10:35 Ukuba ke wabiza abo eleza kubo ilizwi likaThixo wanikwa oothixo, kunye isibhalo singenakwaphulwa,
10:36 Yini na ukuba nithi, ngaye lowo uYise wamngcwalisayo, wamthuma ehlabathini, 'Wena babuye bandinyelisa,'Ngenxa yokuba ndithe, 'NdinguNyana kaThixo?'
10:37 Ukuba andiyenzi imisebenzi kaBawo, musa ukukholwa kum.
10:38 Ke ukuba ndiyayenza, nokuba ngaba ayavuma kukholwa kum, kholwani yiyo yona imisebenzi, ukuze nazi, nikholwe, ukuba uBawo ukum, kwaye mna ndikuye uBawo. "
10:39 ngoko ke, bafuna ukundibamba kuye, kodwa wawaphepha ezandleni zabo.
10:40 Wabuya waya phesheya kweYordan,, uye kuloo ndawo uYohane kulapho kuqala wayebhaptiza. Yabuya yalala khona.
10:41 Kwenyuka into eninzi iphuma kuye. Baye bethetha: "Kanjalo, UYohane kufezeke akukho zimpawu.
10:42 Ke zonke izinto enisukuba ukuba uYohane ngalo mntu kuyinyaniso. "Kwaye abaninzi bakholwa kuye.